Isisombululo seBlow Molding -Ubunjineli beDelta-Ukuphucula ukusebenza kwakho!
Isisombululo seBlow Ukubumba: oomatshini bemveliso kunye nokupakishwa kweebhotile zeplastiki kunye nezikhongozeli: palletizers, testers ezivuzayo, ...
Izixhobo zovavanyo zokulahla
Ukujonga ubunzima bomzimba
Iitreyi Amagumbi okugcina iimpahla
Ukuhambisa izinto ezizezonanto
Ukuncamathela - Ukugquma
Thelekisa iindleko zekhadibhodi
Ubalo lokupakisha ukubalwa kweebhotile ezijikelezileyo
Ubalo lokupakisha ukubalwa kweebhotile ezikwere
Indawo yokubala yokuvuza
Isibali sevolumu ephezulu
Isifundo sexesha lomsebenzi
Lonke inani lexabiso lePlasma
Ikhadibhodi yokubala ipallet
Itafile yokumelana nezinto
Uvavanyo lokuvuza / ubunzima
Izisombululo Blow Ukubumbela
Izisombululo zethu zokupakisha kumzi mveliso wokubumba wokubetha zibandakanya uluhlu olubanzi lweebhegi, iipakethi zeetreyi, iipalletizers kunye neepaliletizers, iipakethe zecala, iitonela ezinciphayo, iindawo zokugcina iimpahla, izisombululo zokupakisha ...
Zuza kumava ethu ngokulawulwa komgangatho weebhotile zakho zeplastiki okanye izikhongozeli: ukuvavanywa kokuvuza, ukujonga ubunzima, ukuhla kwezixhobo zovavanyo ...
Izinto ezihanjiswa ngebhotile (ibhanti ethe tyaba, ityathanga, icala elisecaleni), ukuphatha ipallet, iinyusi, izitshisi zomgaqo…
Imveliso nenkonzo ngokubanzi
Ibali lokubala iindleko
Kwinjineli yeDelta, sinamava ngaphezulu kweminyaka engama-25 yamava izisombululo ekubumbeni ngesibetho.
Oko kwasekwa ngo-1992, besigxile kwi iimfuno zabathengi bethu. Ngokukodwa, ekuphuhliseni uluhlu olubanzi lwezisombululo kwiingxaki ezifunyanwa ziinkampani zeli candelo.
Ukuzekelisa, umgca wethu wemveliso ubandakanya iipalletizers kunye neepalletizers, iipakethi zeetreyi, izixhobo zolawulo lomgangatho ezinje ngabavavanyi bokuvuza okanye abavavanyi bobunzima, iibhegi, iitonela ezinciphayo, iipakethe zecala, izisombululo zokupakisha, iisilos, iindawo zokugcina itreyi, iinkqubo zokukhupha, oomatshini bokucheba, ukuhambisa , iitafile zokupholisa nezokugcina, ukothula iitafile, ukukhetha iibhotile, iiswitshi zendlela, iilifti zebhotile, abalawuli bemigca, ukuphatha abafake izicelo, izithambisi zeplasma…
Ngamafutshane, oomatshini abohlukeneyo kunye nezisombululo ze imveliso kunye nokupakishwa kweebhotile zeplastiki kunye nezikhongozeli!
Ngapha koko, injongo yethu yile:
Ukuphucula ukusebenza kwakho!
Ukuza kuthi ga ngoku, siqulunqa kwaye senze izisombululo ezisebenzisa kakhulu iinkqubo zokuvelisa zabathengi, ngokunciphisa abasebenzi bezandla, izinto zokupakisha kunye neendleko zothutho.
Ndiyabulela kule ndlela, ubuNjineli beDelta sele omnye wabathengisi abaphambili bezisombululo ezizisebenzelayo kushishino ekubumbeni ngesibetho.
Impumelelo yethu isekelwe kuluhlu olubanzi lwezisombululo ezibunjiweyo ezicingwe kakuhle.
Ukongeza, inokuchazwa nangabasebenzi abanobuchule, ukuthembeka kwabo kwaye ngenxa yoko ukuqokelelwa kwe amava, ezinceda kakhulu abathengi bethu.
Enye into kukuba ezintsha. Ukuyila kwethu kubonisa imigangatho ephezulu esizibekele yona njengemakethi kunye nenkokeli yokuyila izinto ngokutsha ekubumbeni ishishini elisezantsi.
Kwaye, okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, siyabulela ukukhula kwethu kwidrive rhoqo yokuphucula inkonzo nangakumbi: silwela ufakelo oluhle kakhulu kwaye Inkxaso emva kokuthengisa.
Ngenxa yoko, sikulungele ukuhlangana neemfuno zabathengi bethu kwihlabathi liphela.
© Delta-Ubunjineli. Onke Amalungelo Agciniwe.
Phucula ukusebenza kwakho
Le yinkqubo engenamagama.
Nceda ufake idilesi ye-imeyile yenkampani.
Ikhonkco liza kuthunyelwa kuwe kwangoko.
Abasebenzisi abangaziwa baya kuba phantsi kokuvunywa kuqala.
Iakhawunti yakho yenziwe, ungangena kwiakhawunti yakho.
Nceda uvumele iimodareyitha zethu ukuba zisebenzise i-akhawunti yakho.
Ikhonkco lakho lokubhalisa sele lithunyelwe kwi-imeyile yakho. Nceda ujonge i-Inbox yakho kunye nefolda yeSpam. Ikhonkco elitsha lokubhalisa liya kuveliswa kwaye lithunyelwe ngeposi yokungena kuphela emva 24 iiyure
Ikhonkco lakho lokungena ngokuzenzekelayo sele lithunyelwe kwi-imeyile yakho. Nceda ujonge i-Inbox yakho kunye nefolda yeSpam. Ikhonkco elitsha lokungena ngokuzenzekelayo liya kwenziwa kwaye lithunyelwe ngeposi yokungena kuphela emva 120 imizuzu
Nceda uqinisekise idilesi yakho ye-imeyile ngokunqakraza kwikhonkco esilithumele kwi-imeyile.
Nceda usebenzise i-imeyile yakho ukuba ungene.
I-imeyile enelogi yokungena ithunyelwe kuwe.
Ngenxa yezizathu zokhuseleko kuya kuthunyelwa i-imeyile kuyo . Nceda ucofe kwikhonkco ngaphakathi kule imeyile ukuze ufumane ukufikelela ngokupheleleyo kwiwebhusayithi.
I-imeyile enekhonkco lokubhalisa ithunyelwe kuwe. Nceda ujonge i-Inbox yakho kunye nefolda yeSpam. Ikhonkco livumelekile 24 iiyure.
Ikhonkco lokungena linokusetyenziswa kuphela ukusuka kwikhompyuter yokuqala.
Iiseva zethu zixakekile, nceda uzame kwakhona kamva okanye unxibelelane nathi.
Iiseva zethu zibuyisele impazamo, nceda uzame kwakhona kamva okanye unxibelelane nathi.
Iiseva zethu zibuyise iprofayile engaphelelanga, nceda uzame kwakhona kamva okanye unxibelelane nathi.
Ikhonkco lakho lokungena liphelelwe lixesha. Nceda usebenzise i-imeyile yakho ukwenza enye ikhonkco lokungena.